QALBI-JAB: Waa Kan Xiddiga Liverpool Ka Tirsan Ee Xalay Sida Rasmiga Ah U Xaqiiqsaday Inaan Bilada Hanashada Horyaalka Lasiin Doonin - Gool24.Net
QALBI-JAB: Waa Kan Xiddiga Liverpool Ka Tirsan Ee Xalay Sida Rasmiga Ah U Xaqiiqsaday Inaan Bilada Hanashada Horyaalka Lasiin Doonin
Kooxda dhawaan kusoo guuleysatay horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa xalay guuldarro aan horyaalkeeda waxyeelo ku ahayn balse hammi weyn oo ay lahayd hagardaamo u geysatay kala kulantay dhigeeda Arsenal.
Liverpool oo hoggaanka ku haysay 1-0 ayaa dhibane u noqotay qaladaad ay sameeyeen xiddigaha udub-dhaxaadka usoo ahaa safka dambe ee kooxdeeda ee Virgil Van Dijk iyo Alisson Becker.
Marka laga yimaado niyad xumaanta guuldarradaas waxa sidoo kale ciyaartaas xaqiiqo aan dhagihiisa u wanaagsanayn ka helay da’yarka 17 sano jirka ah ee Harvey Elliott.
Kaddib markii uu tababare Jurgen Klopp keydka ku ilaaway oo uu bedel u adeegsan waayay Harvey kulankii xalay ayaa haatan si buuxda loo xaqiijiyay inuusan farxada kooxdiisa wada heli doonin da’yarkani oo uusan bilada hanashada horyaalka qaadan doonin.
Sida uu sheegay saxafi Dale Johnson oo ka shaqeeya il-wareedka ESPN, bilada hanashada horyaalka ayay sida sharciga ah qaadan doonaan kaliya ciyaaryahanada soo ciyaaray shan kulan iyo wax ka badan oo Premier League ah.
Ilaa hadda Elliot ayaa kooxdiisa usoo ciyaaray laba kulan oo Premier League ah oo ahaa kulamadii Sheffield United iyo Crystal Palace oo uu keydka kasoo kacay.
Maadaama oo ay Liverpool u hadheen kaliya laba kulan oo ay la ciyaarayaan kooxaha Chelsea iyo Newcastle United, Elliott ayaan awood u yeelan doonin inuu shan kulan gaadho.